UNWTO kwagara Saudi Arabia ejidere: odeakwụkwọ ukwu Zurab Pololikasvili na nnukwu nsogbu?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » UNWTO kwagara Saudi Arabia ejidere: odeakwụkwọ ukwu Zurab Pololikasvili na nnukwu nsogbu?
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Onye minista na -ahụ maka njem na Saudi Arabia Ahmed Al Khateeb. bụ ezigbo onye na -akwagharị na onye na -ama jijiji na njem nlegharị anya ụwa niile, ebe onye odeakwụkwọ UNWTO Zurab Pololikasvi nwere ike ọ gaghị enwe ọrụ n'oge adịghị anya.
Akwụsịla isi ụlọ ọrụ UNWTO, mana nke a abụghị njedebe akụkọ a.
Ntughari nke onye isi UNWTO si Spain gaa Saudi Arabia nwetara nlebara anya nke Prime Minister Spain Pedro Sánchez na onye odeakwụkwọ UN UN Antonio Guterres.
TOnye isi ala Spain nwere oku ekwentị onye isi ala Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud, ebe mmegharị UNWTO nwere ike bụrụ isi ihe kpatara oku maka ọdịnihu mmekọrịta Saudi-Spanish.
N'ụzọ dị ịtụnanya, Antonio Guterres, odeakwụkwọ ukwu tinyekwara aka. Ọtụtụ afọ nke ndị ntuli aka nke onye odeakwụkwọ UNWTO Zurab Pololikasvili emetụtaghị, a ka na-eleghara ya anya na New York. Ugbu a SG na -etinye aka ugbu a mgbe gọọmentị Spain dọrọ ya aka na ntị.
Ntinye aka nke United Nations iji kwụsị mmegharị UNWTO enweela ihe ịga nke ọma ugbu a.
Agbanyeghị, Spain nwere ike kpebie ịkwụsị nkwado ya maka odeakwụkwọ ukwu Pololikashvili.
Dị ka isi mmalite si kwuo mkpagharị na Ntuli aka Jenụwarị maka Zurab Pololikashvili dị ka odeakwụkwọ UNWTO nke Kọmitii Executive UNWTO na-apụta. Site n'enyemaka nke Spain nkwado maka oke egwu onye odeakwụkwọ ukwu na-akwadoghị nwere ike mechaa kwụsị.
Ekwesịrị ikwenye ntuli aka maka Zurab na Mgbakọ Moroccan tupu ngwụcha afọ. Ọ bụghị naanị Spain, mana ọtụtụ mba ndị ọzọ n'ụwa nwere ike ma kwesị imegide nkwenye Zurab maka oge nke abụọ ya, wee mebie ntuli aka 2018 kpamkpam.
eTurboNews rgosiputara nke ọma na odeakwụkwọ ukwu nke UNWTO emebeghị nke ọma na ntuli aka n'ụzọ iwu kwadoro n'ime oge 2018 ya ugbu a.
Ntugharị nke isi ụlọ ọrụ UNWTO na Saudi Arabia
Agbanyeghị na nkwagharị ahụ ababeghị arịrịọ sitere n'aka ndị Saudis, enyeghị ya gọọmentị Gọọmentị Spain, ma ọ bụ UNTWO, Saudi Arabia na -arụsi ọrụ ike na n'ihu ọha iji nweta mmegharị a.
Ọ dị ka Zurab Pololikashvili mesiri Saudi obi ike na ya ga -akwado ya. O mesikwara obi ike na ya ga -akwado Spain. Tweets nke Zurab biputere na-egosi nkwado ya maka Spain ka ehichapụ iji megharịa ọnọdụ ya abụọ n'okwu a.
eTurboNews gakwuuru ọtụtụ ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya gburugburu ụwa. Ha niile kwetara na ha gaara eme ntuli aka maka ịkwaga Saudi Arabia, ma nwee ekele maka nkwado Saudi Arabia nyere ndị njem nlegharị anya ụwa.
eTurboNews mkparịta ụka a na ndị ozi, ndị na-enyere aka na ndị isi ndị ọzọ kwurịtara n'ụzọ doro anya nkwado dị ukwuu maka ntuli aka dị otú a.
O gosikwara na mba ndị otu nwere nkụda mmụọ nwere nke ukwuu na UNWTO ugbu a.
N'ihi ntinye aka nke United Nations, ọ nwere ike bụrụ na a kwụsịtụrụ nkwaghari a ruo ugbu a, mana mkparịta ụka na mkparịta ụka gbasara ya yiri ka na -aga n'ihu.
Enwere ike nwee olile anya na mmetụta Saudi Arabia na ike mmefu ego na njem nlegharị anya ụwa ga -aga n'ihu. Ugbu a bụ ohere maka UNWTO siri ike, njem ọhụrụ zuru ụwa ọnụ siri ike, na ụlọ ọrụ njem na -apụta na nsogbu ugbu a.
Site na itinye aka na Saudi Arabia, enweela olile anya maka ọtụtụ mba dabere na njem nlegharị anya n'oge ọdịnihu gbara ọchịchịrị.
Saudi Arabia nwere ike nwee amamihe idozi okwu a na isoro Spain na -emekọrịta ihe. Ikekwe mba abụọ a ọnụ nwere ike rụọ ọrụ dị mkpa iji weghachite mkpa, iguzo, na mmetụta nke World Tourism Organisation kwesịrị iduzi ngalaba a n'ọrịa a.
María Reyes Maroto Illera (amụrụ 19 Disemba 1973) bụ onye minista ụlọ ọrụ, azụmaahịa na njem nlegharị anya na gọọmentị Prime Minister Pedro Sánchez kemgbe 2018.
A hụla minista Maroto ka ọ na -esighị ike na Spain. Onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya na Spain Reyes Maroto, na -agwa Canal Sur Radio na Mọnde, tụrụ aro na mgbawa nke ugwu mgbawa na La Palma bụ ihe nwere ike ịmasị ndị njem., na -agba ndị ọbịa ume ịbịa.
Taa Lava sitere na ugwu mgbawa dị na La Palma rutere n'oké osimiri. Nchegbu kachasị nke ndị ọchịchị ugbu a bụ igwe ojii na -egbu egbu nke nwere ike iru agwaetiti Canary, nke sitere na kọntaktị n'etiti nkume a wụrụ awụ na oké osimiri.
Mmekọrịta mmeri/mmeri na Saudi Arabia ga -ewetara onye minista njem nlegharị anya Spain ugbu a.
Kedu ihe ga -ewe ịkwaga UNWTO?
A ga -achọ votu 106 iji kwado ịkwaga isi ụlọ ọrụ ahụ. Dabere na eTurboNews Isi mmalite, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90% nke votu ndị a ka echekwabara. Enweela nkwado dị ukwuu site n'Africa, ụwa Arab, kamakwa Caribbean, na ọbụna ụfọdụ mba Europe.
Gịnị kpatara Saudi Arabia?
Sobodo Arabia n'ime atụmatụ atụmatụ ọgbaghara ya nke 2030 nwere njem n'etiti ihe atọ kacha mkpa.
Onye isi ala Mohammed bin Salman atụpụtala mba ahụ aga site na ntinye njem njem 1% na GDP mba rue 10% na atụmatụ ga -aga ruo 2030.
Onye minista njem nlegharị anya Saudi Arabia bụ Ahmed Al Khateeb na -eme atụmatụ a.
N'etiti Septemba, Gọọmentị Spanish haziri nleta n'isi ụlọ ọrụ UNWTO n'ọdịnihu na Madrid, Palacio de Congresos de La Castellana.
Scretary-General Pololikashvili gara nleta ahụ mana emesịa gbanahụ na nnọkọ mgbasa ozi nke ya na ndị ozi Reyes Maroto na José Manuel Albares. Ọ gbaghị mbọ ịga mgbasa ozi ma ọ bụ ịgọnarị asịrị gbasara mgbanwe isi ụlọ ọrụ na nkwado ya maka Riyadh
Nke ahụ bụ mgbe gọọmentị Spain kpebiri ịga ozugbo na UN.
Ọnwa ole na ole gara aga, UNWTO haziri nzukọ na mba South Africa iji kpaa maka ndụmọdụ dịịrị imepụta ụdị njem njem maka mba ndị ahụ.
Ndị nnọchiteanya si mba Afrịka iri anọ na asaa bịara nzukọ a ụbọchị atọ. “N'ebe ahụ, odeakwụkwọ ukwu nwere ike ịgwa ha niile okwu na nzuzo, na-enweghị ndị akaebe si kọntinent ndị ọzọ.
Ego Saudi Arabia dị njikere itinye n'ọrụ ga -eme nke ọma maka ọrụ njem na njem nlegharị anya nke mba ndị ahụ.
Mmekọrịta dị n'etiti Spain na UNWTO abụghị ihe pụrụ iche mana ọ dị mma, dị ka akụkọ sitere na mgbasa ozi azụmaahịa Spanish. "Agbanyeghị, Spain tụrụ vootu maka Zurab megide ntuli aka ọzọ nke gụnyere osote odeakwụkwọ Spanish."
Eziokwu inwe isi ụlọ ọrụ UNWTO anaghị eme Spain isi obodo njem nlegharị anya ụwa, na -emegide ihe ụfọdụ chọrọ ịhụ.
"Gọọmentị Spanish amachaghị na a na -akwụ ụgwọ isi ụlọ ọrụ na -akpaghị aka kwa ọnwa, ọ nweghịkwa onye na -achọpụta maka ya belụsọ onye ọrụ nyere iwu ka enyefe ego ụlọ akụ, nke ka na -akpaghị aka." Spain na -akwụ ụgwọ maka isi ụlọ ọrụ UNWTO. Ihe a niile na -efu Spain ihe dị ka Nde Euro 2 kwa afọ.
The Onye odeakwụkwọ ukwu nke UNWTO na-ebo ebubo otu ahụ dị ka ndị ọrụ mba ofesi (ILO) na onye isi ụlọ ọrụ mmemme United Nations Development Programme (UNDP): $ 20,000 kwa ọnwa maka ịkwụ ụgwọ ọnwa iri na abụọ = $ 12. Ọ na -anata ,240,000 40,000 kwa afọ maka ụlọ tinyere ụgbọ ala na ọkwọ ụgbọ ala. UNWTO na-akwụ onye odeakwụkwọ ukwu ụgwọ, ọ bụghị Spain.
Ihe mba ọ bụla na -akwụ maka ịbụ onye otu UNWTO dabere na GDP, ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ, na ntụzịaka ndị njem ọ na -emetụta. Ọnụ ego ahụ enweghị ike gafere 5% nke mmefu ego nke nzukọ.
Mba ndị na -akwụkarị ụgwọ bụ France, China, Japan, Germany, na Spain, nke na -enye ihe dị ka euro 357,000 kwa afọ. Ndị na -akwụ obere ego bụ Seychelles na Samoa, na -akwụ ụgwọ euro 16,700 kwa afọ.
UNWTO na -eweta ntakịrị uru na ụlọ ọrụ njem na ebe njedebe. Na -elekwasị anya na -adịghị mma, na -enweghị mmefu ego -nde dollar 12 kwa afọ, nke 60% na -aga ụgwọ ọnwa-, ya na ndị ọrụ obodo ya họpụtara. Nrụrụ aka nke ime obodo na ọnọdụ kwụ chịm na omume mgbe ochie anaghịzi abụbu okwu.
UNWTO nwere ugbu a Ndị òtù 159. United Nations nwere ndị otu obodo 193.
United States hapụrụ UNWTO na 1995, Belgium na 1997, United Kingdom na 2009, Canada na 2012, na Australia na 2014.
Ọzọkwa, ọnụnọ bụ Ireland, Saịprọs, New Zealand, Luxembourg, na mba Nordic niile: Iceland, Norway, Sweden, Finland, na Denmark, yana mba Baltic abụọ, Estonia na Lithuania na -eme UNWTO nzukọ na -adịghị ike.
O doro anya na ntụzịaka ọhụrụ maka UNWTO dị mkpa maka ụlọ ọrụ jikọtara UN ka ọ dịrị ndụ.
Ruo ugbu a Saudi Arabia azaghachila UNWTO na Njem Nleta Ụwa kpam kpam dịka mba ọ bụla ọzọ n'ụwa. A ga -enwe nzọụkwụ ọzọ, nke ahụ bụ n'ezie.
Ọstrelia ezipụla ndị agha na Solomon Islands mgbe…
Ụgbọ elu ọhụrụ si Antigua gaa Barbados na...
2022 Obodo kacha emesapụ aka na USA
Achọpụtara ihe kacha mma na WTM 2021
WTN weputara amụma ntuli aka UNWTO ọhụrụ
Martinique meghere mbara igwe ya na ụgbọ elu Air Canada
Ndị njem njem India na ndị njem nlegharị anya Nepal sonye ugbu a…
Ezi anụ ezi onye anaghị eri anụ vs ezigbo anụ ezi: ịzụlite ezi ọhụrụ…
Agbanyela ụlọ oriri na ọṅụṅụ kwarantaini COVID-19 na Australia